Otú e si etinye Music si iPod ka iTunes
> Resource> iTunes> Olee na-etinye Music si iPod ka iTunes
M nwere ụyọkọ music na m iPod, ma apụghị m iṅomi ya site m iPod jidesie ọhụrụ m ugbu a version nke iTunes. M nwetara na music si m ochie na kọmputa na ochie iTunes melite na ugbu a mgbe m chọrọ na-etinye music si m iPod ka ọhụrụ m kọmputa iTunes, ọ na-adịghị ka m. Enwere ụzọ na m nwere ike ime nke a?
Ee n'ezie. Ọ bụ dị mfe dị ka achịcha na-etinye music si iPod ọ bụla iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ị dị nnọọ mkpa gaa a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. Ọ bụrụ na ị na-enweghị doro anya echiche banyere ngwá ọrụ, ị nwere ike na-agbalị a - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ngwá ọrụ a na-enye gị ka ị na-etinye music si iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị mgbalị. Ọ bụ nnọọ ike nke na ọ ga-tọghata ma nyefee music faịlụ na kedi formats. N'out oge, ọ ga-etinye music Ama, dị ka play adabere, skips na Anyela, si gị iPod ka iTunes, ime ka ị na-enwe ọkacha mmasị gị songs na iTunes n'ọbá akwụkwọ na-agbahapụ.
Download a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-agbalị na-agbakwunye music si iPod ka iTunes.
N'okpuru ebe a bụ 2 nzọụkwụ banyere agbakwunye gị iPod music ka iTunes na windo version. Wụnye ngwá ọrụ a na PC gị. Agba ya, na ị ga-enwe a window n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPod ka PC
Jiri iPod si eriri USB jikọọ gị iPod ka PC. Ka anya dị ka gị iPod jikọọ, ngwá ọrụ a ga-chọpụta ya ma na-egosi ya na isi window.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado etinye music si iPod aka, iPod nano, iPod kpochapụwo na iPod ịkpọgharịa on iTunes n'ọbá akwụkwọ. Lelee zuru ezu Ama banyere akwado iPod ụdị ebe a.
Nzọụkwụ 2. Tinye music si iPod ka iTunes
Ebe a nwere ụzọ abụọ dị ịgbakwunye music si iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Otu ụzọ bụ na ịpị "Copy iDevice ka iTunes". Mgbe a obere window Pop elu, pịa "Malite". Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi a ndepụta na nke ndị niile na mgbasa ozi faịlụ i nwere ike tinye ka iTunes na-e. Dị nnọọ nne Mmetụta anya music na listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, pịa "Detuo na iTunes". Ngwá ọrụ a ga-chọpụta na ịgbakwunye songs na gị na iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị.
Ndị ọzọ ụzọ na-etinye music si iPod on iTunes bụ dị ka nke a. Na-ekpe ndekọ osisi, pịa "Media". N'elu akara, pịa "Music". Dị ka ị na-ahụ, e nwere na-na na abụọ nhọrọ: "Export ka" na "Smart Mbupụ na iTunes". Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ nyo songs na-ama na iTunes n'ọbá akwụkwọ ma tinye ndị na iTunes adịghị nwere, pịa "Smart Mbupụ na iTunes".
Gịnị ma ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ tinye songs selectively si gị iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ? Họrọ songs (All songs ma ọ bụ ụfọdụ songs) na i bu n'obi ịgbakwunye. Pịa triangle n'okpuru "Export ka". Site ndọpụta menu, họrọ "Mbupụ na iTunes Library".
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye listi ọkpụkpọ iji iTunes Ọbá akwụkwọ, ị nwere ike pịa "Playlist" ke ekpe sidebar. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ. N'otu aka ahụ. Pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka"> "Mbupụ na iTunes Library".
Ugbu a, ị maara otú tinye music si iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụ nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Download TunesGo na-agbalị ya onwe gị.
Nwere ike ghara ihichapụ Photos si iPad --edozi ya
Otú nyefee Music si iPad ka laptọọpụ
Olee otú Detuo Pictures si iPhone ka Computer
Otú nyefee Music si iTunes ka iPod
iPod aka Manager: Jikwaa faịlụ gị iPod aka
Otú nyefee Music si iPod aka ka Computer
Otú nyefee music si iphone ngwa iTunes
Olee otú Detuo iPod Music ka iTunes
Olee otú Wụt Song Lyrics maka iTunes na iPod
10 iTunes Keyboard Uzo mkpirisi I Kwesịrị Ịmara
3 Ụzọ Iji belata Size nke gị iTunes Library